ထို cyborgs ၏အရုဏ်: လူသားမြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို - သတင်း Rule
ထို cyborgs ၏အရုဏ်: လူသားမြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ထို cyborgs ၏အရုဏ်: လူသားမြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို” ကရေးသားခဲ့သည် , The Guardian ကအင်္ဂါနေ့တွင် 26 မေလများအတွက် 2015 15.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Name ကို: Cyborg.
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာင်ဤသူကား? ဒါဟာဘယ်သူ့ကိုမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အမှန်.
ငါ့ကို? ဟုတ်ကဲ့, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့အလွန်အမင်းကြွယ်ဝသောင့်အဖြစ်.
ah. ကောင်းပြီဒါဝေးအလွန်အမင်းချမ်းသာကြွယ်ဖြစ်လာကြပြီမဟုတ်. သနားခြင်း. ထိုကိစ္စတွင်သင်တစ်ဦးစုံလင်သောကနျြးမာ၏အသက်နှင့်သီအိုရီကိုထာဝရအပျြောရှငျမှုအပေါ်ထုတ်လက်လွတ်လိမ့်မယ်.
အဲဒါကောင်းသားပဲ. လူအပေါင်းတို့သည်ပီဇာသစ်သားပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့နှင့် Wi-Fi ကိုအဆက်မပြတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖွစျလိမျ့မညျ? သငျသညျအလောငျးအစား.
Related: Sapiens မှ: Yuval နောဧသည်အဘိဓါန် Harari အားဖြင့်လူသား၏ A Brief History - ပြန်လည်သုံးသပ်
ဒါကြောင့်ကပြောပါတယ်သူကားအဘယ်သူ? ပါမောက္ခ Yuval နောဧသည်အဘိဓါန် Harari.
အဘယ်သူသည်ဖြစ်တော်မူသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူသုံးအမည်များရှိပါဘူး? သူကတစ်ဦးလူကြိုက်များအစ္စရေးသမိုင်းပညာရှင်ရဲ့ငါမသိရပါဘူး. သူဟာလို့ခေါ်တဲ့ bestseller ပြုသောအမှုဖွင် Sapiens မှ: လူသားတစ်ဦးသမိုင်းအကျဉ်း, သောသူသည်ဟေစာပေပွဲတော်မှာအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ရဲ့.
သူဘာပွောခဲ့? "ငါကနောက်လာမည့်အတွက်ဖွယ်ရှိသည်ထင် 200 နှစ်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့် Homo Sapiens တစ်ဦးဘုရားသခငျ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏အချို့သောစိတ်ကူးသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်, ဇီဝခြယ်လှယ်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာမှတဆင့်သို့မဟုတ် Cyborg ၏ဖန်တီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေ, အစိတ်အပိုင်း-အော်ဂဲနစ်အစိတ်အပိုင်း Non-အော်ဂဲနစ်။ "
သမိုင်းပညာရှင်အတိတ်အကြောင်းကိုပြောဆိုရန်ထင်ကြသည်မဟုတ်, အများအားဖြင့်? ဟုတ်ကဲ့, နှင့်အဘိဓါန် Harari လည်းလုပ်ပေးပါဘူး. သူကသူတို့ကြီးများရှိလူများ function ကိုပြုသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရေးနှင့်ပိုက်ဆံအဖြစ်ကြီးမြတ်ပြောသောမုသာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ဘူးသောစာရငျးယူ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသိုင်းအဝိုင်း.
Related: Sapiens မှ: လူသားတစ်ဦးသမိုင်းအကျဉ်း – podcast
ဟုတ်လား. ငါသည်သူ၏မူပိုင်စစ်ဆေးမှုများရှိသည်နိုင်, ထိုအခါ? ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဒီအကြောင်းသူ့ကိုမေးမြန်းအကြံပြု. သူကလည်းနည်းပညာကိုကြွယ်ဝသောလူ amortal နှင့်လုံးဝနီးပါး All-အစွမ်းထက်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအပြောသောမုသာယခု၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ရောက်ရှိနေကြတယ်ထင်, သူတို့နောက်တဖန်ဘုရားသခငျသညျမလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအဓိပ်ပာယျ.
amortal ဘာလဲ? ဒါဟာဆိုလိုသည်, သီအိုရီအ, သငျသညျအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်နိုင်, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာတစ်စုံတစ်ဦးကမကျေမနပ်ရငျသညျထတပ်များပါဘူးအဖြစ်.
ဝေးအာမခံချက်မှ, ငါထင်သင့်ပါ. အဘယ်သို့နည်းပညာကိုဒီပြည့်စုံလိမ့်မည်? ကောင်းစွာ, သင်သည်သင်၏ဆဲလ်တွေနုပျိုနှင့်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်သင့်သွေးသို့အသိဉာဏ် nanobots ထိုးသွင်းနိုင်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ကွန်ပျူတာနှင့်အမျိုးမျိုးသောတန်ဆာသှငျးပေးနိုင်တယ်လို့, သငျသညျလူစွမ်းကောင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း. သို့မဟုတ်သင်ရုံရိုးရိုးသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာသို့သင့်ရဲ့စိတ်ကို upload နှင့်ဘာမှမခံစားရနိုင်.
ငါကစျေးကြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုမြင်ကြပါ. ဘယ်လိုအလွန်အမင်းချမ်းသာကြွယ်မဟုတ်သောကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီအကြောင်း? ကျနော်တို့အနာဂတ်၌အဘယျသို့ဖွစျလိမျ့မညျ? ယဉျကြေးသော.
ဆိုကြ: ဒီသွားလျှင် "super-ကြွယ်ဝသောလည်းဖြစ်တည်မှု angst အ​​ားဖြင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ?"
မပြောပါနှင့်: "သူတို့ကပြီးသားပါ။ "
23748	0 အပိုဒ်, ဇီဝဗေဒ, မှတ်ချက် & အင်္ဂါရပ်များ, computing, အင်္ဂါရပ်များ, G2 မှာ, မျိုးရိုးဗီဇ, ကျန်းမာခြင်း, ကျန်းမာခြင်း & သာယာဝပြောရေး, အသက်နှင့်စတိုင်, မှတ်စုဖြတ်သွား, စက်ရုပ်, သိပ္ပံ, shortcuts, Society က, နည်းပညာ, အုပ်ထိန်းသူ
← အီတလီမှာပေါ့ပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းအမိန့်ကတော့ Uber Pebble အချိန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →